पहिलाे भाेट अनुभव, आँफै उम्मेदवार, जाे वडाध्यक्षमा चुनिए ! जनताप्रति समर्पित रहने घाेषणा - Sero Fero News
पहिलाे भाेट अनुभव, आँफै उम्मेदवार, जाे वडाध्यक्षमा चुनिए ! जनताप्रति समर्पित रहने घाेषणा
सेराेफेराेन्यूज प्रकाशित मिती - ८ जेष्ठ २०७९, आइतवार
पाल्पा, जेठ ८
रम्भा गाउँपालिका वडा नं १ साठीबजार स्थायी घर भएका इश्वरी काफ्ले अहिले चर्चामा छन् । मत, मतदाता, राजनीति, निर्वाचनभन्दा बाहिर रहेर लामाे समय बाहिर रहेर निस्वार्थ सेवामा लागेका इश्वरी अहिले रम्भा गाउँपालिका वडा नं. १, हुँगीकाे वडाध्यक्षमा चयन भएसँगै चर्चा चुलिएकाे हाे ।
सामाजिक सेवालाइ प्राथमिकतामा राखेर नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका ३८ वर्षीय काफ्ले नेकपा एमालेकाे २० अाैं वर्षदेखीकाे राजकाजलाइ चिर्न सफल भएका हुन् । अचम्म त के छ भने उनी पहिलाे पटक मत अनुभव लिने व्यक्ति समेत हुन् । वडाध्यक्षमा चुनिएका काफ्लेले १७ बर्ष कतारमा संघर्ष गरे । जब जनताहरूले स्थानीय सरकारकाे अनुभूती नभएकाे भन्दै अाक्राेस व्यक्त गर्न थाले तिनै युवा इश्वर गाउँ फर्कने अभियानमा हानिए । उनले गाउँ फर्किएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरे । सयाैं युवाकाे नाम नामावलीमा चढाउन मद्दत गरे । युवाहरूलाइ साथमा लिएर अगाडी बढे । नेपाली कांग्रेस रम्भाकाे सचिव हुँदै गर्दा वडाध्यक्षकाे उम्मेदवार भएर वडाध्यक्षमा विजय पनि भए ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन भएसँगै वास्तविक संघर्षकाे परीक्षा सुरू भएकाे बताउने काफ्लेले मतदानकाे नयाँ अनुभव लिन पाउँदा निकै खुसी थिए । त्यस खुसीमा थप मलजल पुगेकाे छ । वडाध्यक्षमा चुनिएकाे खुसीयालीसँगै मतदाताप्रति छुट्टै सहानुभूती र माया सदैव रहने प्रण समेत गरेका छन् । २० बर्षको उमेरमै लाहुर गएका उनी आफ्नो कमाइको केही प्रतिशत रकम आफ्नो जन्मभुमिकाको बिपन्नता,असहाय र दुखि लाई छुट्याउदै सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दै अाइरहेका थिए । त्यसै समय विश्वभर काेराेना महामारी पनि सुरू भयाे । गाउँमा उपचार नै नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भयाे । त्यसै माैकामा ईश्वर काफ्ले कतारलाइ सधैँका लागि हात हल्लाउँदै गाउँमै फर्किए । काेराेनाका समयमा संक्रमितहरूलाइ अस्पतालसम्म पुर्याउने तथा अार्थिक सहयाेगमा जुटे ।
थप जानकारीका लागि तलकाे लिंकमा जानुहाेला…
वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएमा आफुले पाउने सबै सेवा सुविधा जनताकै लागि समर्पित गर्ने घोषणा गरेका काफ्लेले “आर्थिक पारदर्शिता काममा ईमानदारिता, समग्र वडाको बिकास हाम्रो प्रर्तिवद्धता” लाई आफ्नो मुल नारा बनाएका छन् । उनले सार्वजनिक निजि सहकार्यमा आधारित एउटा नमुना आवासिय विद्यालय स्थापना गर्ने अठोट लिएका छन् । उच्चतम प्रविधि सहितको त्यस विद्यालयमा विभिन्न देशका प्रविधिक विद्यालयसंग शैक्षिक सहकार्य गर्ने योजना छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक पुस्तकालय, जेष्ठ नागरीक विश्राम स्थल, सामुदायिक अध्ययन तथा योग साधना केन्द्र स्थापना गर्ने, शिक्षण सिकाईमा भ्रमण तथा तालिमको अवसर प्रदान गर्न अन्तराष्ट्रिय शिक्षण सिकाईको विधिमा केन्द्र र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी उचित भ्रमणको ब्यवस्था गरी शिक्षणको सिकाईलाई थप प्रभावकारीक बनाउन पहल गर्ने, वार्डको उत्कृष्ट विद्यार्थी छात्र छात्रालाई वार्ड कार्यसमितिको मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्ने लगायतका कार्य पनि गर्ने युवा नेता काफ्लेले बताए । सेराेफेराेन्यूज टिमकाे हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।